Inona no azonao atao amin'ny olona mitady SEO?
Misy safidy roa lehibe ho an'ny mpivarotra izay manangana ny orinasa an-tserasera. Ny safidy voalohany dia ny mamolavola ny solo-pahefana amin'ny tenanao manokana, ny fianarana SEO toro-làlana sy ny torolalana ary ny miezaka ny mijanona amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny tontolon'ny nomerika digital. Ny safidy faharoa dia ny manakarama mpitsabo SEO na ekipa manam-pahaizana manokana izay manana traikefa manokana amin'ity sehatra ity. Amin'ity tranga ity dia mila mampiasa vola amin'ny fampielezan-kevitra fanatsarana ianao. Na izany aza, azonao atao ny mahazo fiverenana avo lenta amin'ny fampiasam-bola na ny andininy hafa, mandany ny teti-bola momba ny asa ratsy mahomby.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ireo mpivarotra an-tserasera izay mikaroka karazan-dingam-panamafisana karazana fikarohana mba hanatsarana ny fanatrehany eo amin'ny aterineto.Misy karazana TOP tena ilainao hangatahana avy amin'ireo mpanome tolotra aterineto.
Inona no hikaroka ny asa fanadiovana môtera?
Amin'izao fotoana izao dia misy orinasa mpanentana amin'ny alina izay manome ny antsoina hoe "serivisy SEO. "Tsy maninona na manome vidiny ambony na sarobidy izy ireo. Raha toa ka tsy fantatr'ireo mpanome tolotra SEO ny tokony hatao amin'ny tranokalanao ary manana traikefa kely ao anatin'ity sehatra ity ianao, dia mety te-haka ny volanao izy ireo. Misy lafiny maro izay miditra ao anaty sary manintona ankapobeny, ary mila taona maro iainana mba hahatakarana ny tetikady sy ny tsy mety hitondra valiny. Ankoatra izay, raha miara-miasa amin'ny masoivoho mpanentana vao haingana ianao, ireo manam-pahaizana SEO izay miasa any dia hampihatra ao amin'ny tranokalanao.
Manoro hevitra mafy aho mba hisorohana orinasa izay manome soso-kevitra tokana karazana karazana fikarohana. Mba hampitomboanao ny fahombiazan'ny fanentanana fanentanana, mila orinasa iray ianao izay hanatona fanentanana fanentanana amin'ny lafiny rehetra ary hahafahanao manome tolotra fanampiny momba ny varotra toy ny marketing mediam-bahoaka, e-mail marketing, sy ny sisa.
Raha manomboka mitady seo SEO ianao, dia fotoana hianarana bebe kokoa momba ny mpandainga sy ny lamandy.
Teknôlôjika ny sisintany voalohany. Anisan'izany ny tranonkala tranonkala, code HTML, famolavolana, ary fifandraisana. Ny fanamafisana ara-pananahana dia mamaritra ny fomba mora na sarotra ho an'ny fikarohana fikarohana mba hampisehoana sy hanehoana ny votoatin'ny tranonkala.
Ny sisintany fanatsarana faharoa dia ny fanatsarana ny pejy. Ny fanavaozana hita ao amin'ny pejy dia manondro ny tranonkala anatiny, HTML tags, votoatiny, metadata ary fikarohana teny fototra. Ity famatsiam-bola ity dia natao hampitomboana ny fifamoivoizana an-tsokosoko mankany amin'ny tranokalanao ary hampitomboana ny fihenam-bidyo.
Ny sisintany fanatsarana fahatelo dia fanatsarana ny pejy. Io no iray amin'ireo fototra tena manan-danja amin'ny fomba fitsaboana. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahefan'ny tranonkala eo imason'ny milina fikarohana izy io. Ny tranonkala fanatsarana ny tranokala dia manondro ny fananganana rohy.
Noho izany, ny mpikaroka momba ny fanadiovana fikarohana anao dia mila mahatakatra sy vonona ny hampihatra ireo soso-kevitra rehetra ireo eo amin'ny toerana misy anao Source .